နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ဒီဇင်ဘာလရောက်လာပြီ ဆိုတာ နဲ့ ပိုပြီး ပျော်ရွှင် နေမိပါတယ် ။ ရာသီဥတု အရလည်း အေးဆေးတာမို့နေရထိ်ုင်ရတာ သက်တောင့် သက်သာ ရှိပြီး မနက်စောစော မြူနှင်းတွေ ဝေနေတဲ့ မြင်ကွင်း ကို ကြည့် ရတာ လွမ်းစဖွယ် ပန်းချီကား တချပ်လို မို့ အိပ်မက်များလား လို့ တောင်ထင်မိတယ် ။ အာရုံအတက် နေထွက် လာပေမဲ့ အချမ်းဓါတ်က လျော့ မသွားပဲ မနက်စောစော ဆောင်းလေအေးအေးမှာ လမ်းလျှောက်ထွက် ရတဲ့အရသာ ၊ အင်းလျား ကန်ဘောင်ပေါ်ကနေပြီး ခပ်ပြပြလေး မြင်နေရတဲ့ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးကို အဝေးကနေ လှမ်းပြီး ဖူးမြှော်ရတဲ့ ကြည်နူးမှု တွေ ကို ဘာနဲ့ မှ လဲလို့မရလောက်နိုင်ပါဘူး ။ ဒီတနှစ် ရဲ့ပျော်ရွှင်ဘွယ်ရာ လ ဒီဇင်ဘာမှာ လည်း မွေးရပ်မြေ မှာ တပါတ်တာမျှ ရှိနေခဲ့ ရတဲ့ အတွက် ပိုပြီး ကြည်နူး မိပါတယ် ။
ဒီနှစ် ဒီနေ့ဒီ ခရစ်စမတ် နေ့မှာတော့ ချစ်လှစွာသော မိသားစု နဲ့ အတူ တပြည်ရပ်ခြားမှာ ရှိနေတာမို့ ထူးထူးခြားခြား ရေးပြီး ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးဖို့ ရာ အဆင်မပြေ တာ မို့လွယ်လင့်တကူပဲ အမှတ်တရ ဆားချက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ခရစ်စမတ် လေး ဖြစ်ပါစေ ။ နှစ်သစ်မှာ မျှော်လင့်ချက် များ ပြည့်ဝ ကြပြီး ကမ္ဘာသား အားလုံး ချမ်းမြေ့ကျန်းမာ အဆင်ပြေ အောင်မြင် နိုင်ကြပါစေ ။
:kiki : at 12/25/2009 01:20:00 AM
ကျွန်ုပ် ၊ ဘော်ဒါကြီးများ နှင့် အပေါ်ထပ် နဲ့ အောက်ထပ် ဇာတ်လမ်း....
“စလုံး”တို့ တိုင်းပြည် မှာ လုံးလုံးထွေးထွေး နေကြသော ဘလောဂါ တသိုက် ၊ သမီးယောက်ဖု များ ပလူးအလဲ အကြည်ဆိုက် နေကြသည်များကို ခုတလော မတွေ့ချင် မမြင်ချင် အဆုံး ဖြစ်နေရသည် ။ ဒီတော့လည်း သူတို့တတွေချည်းသာ စည်းလုံး ညီညွတ်ကြောင်း အင်အားပြ သကဲ့သို့ထင်မြင်စရာ အခြေအနေတွေများ ဖြစ်နေသည့် အတွက် အကျွန်ုပ်တို့“ထဆင်ထူး” သမားတွေလည်း ၊ထထကြွကြွ နဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်း ၊တစိတ်တည်း တဝမ်းတည်း ရှိနေတဲ့အကြောင်း ကို သိစေလို၍ ဤစာကို ရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။ ( ဤကား အချီး ..... )
ဘလောဂ် တကာလည်ပြီး မိန့်မိန့် ကြီး ၊မန့် မန် စားတတ်သော (အိုကွယ် မှားပါတယ်... သွေ့ ပုချီ )...မိန့်မိန့်ကြီး ကော်မန့် ပေးတတ်သော ဘလော့တကာလည် “ ဦးသုနြေ္ဒ ”ဆိုသူ မှာ ပြီးခဲ့သော ပ်ို့ စ်မှာ သူ့ ကို မေ့ပြီးချန်ထားခဲ့ သည့် အတွက် ၊ လူကြီးပြီ ပြီ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက် နေပါ၍ ၄င်း အား ပွဲထုတ်လိုက်ပါသည် ။ ( ဤကား ... အချွန် )
သိတော်မူကြသည့် အတိုင်း အလကားရလျှင် လှေကိုတောင် စုန်ချည် ဆန်ချည် အပြန်ပြန် လှော်တတ်သူ အကျွန်ုပ် တယောက် တပါတ်စာ အလုပ်များ သိမ်းကျုံးလုပ် ပြီး ၊ အနားရသည့် ရှားရှားပါးပါးရက် များမှာ အိမ်တွင် အလကားနေပါက မီတာတက်မည် ၊ဟင်းဘိုး ကုန်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ဟိုဟိုဒီဒီလည် ပြီး ဟိုအိမ် ဒီအိမ် တက်စားလေ့ ရှိပါသည် ။
ယနေ့ညတွင်လည်း ထုံးစံ အတိုင်း အလကား ဝါးနေကြ အိမ်တအိမ်သို့၊ မဖိတ်ချင် ဖိတ်ချင် ဖြင့် အဖိတ်ခံ ရပါသဖြင့် မသွားချင် သွားချင်ဖြင့် သွားပြီး ၊ စားချင် ဝါးချင် သည်များကို ဝါးရဖို့အလို့ ငှာ အချိန်မီ ထွက်လာခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါအိမ် ကား .. အသင်တို့ ဖတ်နေ လည်နေကြ နာမယ်ကြီးဘလော့ဂါကြီးများ စုဝေးနေထိ်ုင်ရာ အရပ် ဖြစ်ပါသည် ။ သူ တို့ နေထိုင်ရာ ၅ ထပ် တိုက်ပေါ်သို့ဆာ လောင် မွတ်သိပ်စွာတက်လာသော အကျွန်ုပ် မှာ ဆွဲနေကြ အစားအစာများ မဆွဲ ရသေးမီ အိမ်ထဲ ဝင်ရန် အလို့ ငှာ ပိတ်ထားသော သံပန်းတံခါးကြီးဘေးမှ လူခေါ် ခေါင်းလောင်းလေးကို ဆွဲလိုက်မိချိန်တွင် ....
“ ဗလတ် ..ဗလတ် ..ဗလတ် ..”
အလိုလေး ၊ ခေါင်းလောင်းသံက“ ကလင် ကလင်” မြည်ရမည့် အစား အဘယ်ကြောင့်များ ဗလတ် မြည်နေရပါသတုန်း လို့အံ့သြ သလို ဖြစ်မိရသေးသည် ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ ပဲ အထဲမှ တံခါးလာဖွင့်ပေးသူ အချိန်မီ ထွက်လာ၍ အဆိုပါ အိမ်ထဲသို့ဆိုက်မြိုက်စွာ ဝင်ရောက်ရသည် ။ တံခါးလာဖွင့်ပေးသူမှာ ကိုညောင်ရမ်း .. ( သမိန် ပေါသွပ်၏ ညောင်ရမ်း ခေတ်မစားမီ ကတည်းက သူက မူလ ပထမ ညောင်ရမ်း ဟု သိရသည် ) ။ ဟိုညောင်ရမ်းက ဒါးရှည်ကြီး ကိုင်တတ်ပေမဲ့ ဒီညောင်ရမ်းက ယောင်းမရှည်ကြီးကိုင်ထားခြင်းတော့ ကွာပါသည် ။ ယောင်းမကြီး ကိုင် ဆို ၊ သူက အိုးသူကြီး လုပ်နေသူကိုး ၊“ မင်္ဂလာပါ” ဟု လက်အုပ်ကလေးချီကာ အပြန် အလှန် နှုတ်ဆက်ပြီး သကာလ(အဟက်.. ရွှေ ပြည်ကြီးမှ လူကြီးလူဂေါင်းများ အား အနှီ နှုတ်ဆက် နည်း အတိုင်း အတုမြင် အတတ်သင် ထားခြင်းဖြစ်သည် ၊ ) ၊ အကျွန်ုပ်လည်း ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ယာ လိုပင် သဘောထား၍ စားတော်ခန်း ( ထမင်းစားခန်း) ထဲ သို့တန်းမတ်စွာ ဝင်လိုက်သည် ။
ထိုအချိန်တွင် ...“ မ ကိ ၊ နေကောင်းတယ်နော် ” ဟူသော ချိ နဲ့ စွာ နှုတ်ဆက်သံ ကြားရ၍ လှည့်ကြည့် မိလိုက်ချိန်တွင် အံ့သြဘွယ် ကောင်းလောက်အောင် ယူပစ်လိုက်သလို ပိန်ကျသွားသော သူ့အား တွေ့ လိုက်ရသဖြင့် “ ဪ.. သူကပဲ ပြန်မေးနေရသေးတယ်နော် ”ဟု စိတ်ထဲ တွေးမိလိုက်သေးသည် ။ အချစ်ရဲ့ စွမ်းအားများ ဒီလောက် ကြီးမားကြောင်း သူက သက်သေပြလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ယူ မိလိုက်သည် ။ ထိုသူကား ၊ ရည်းစားပစ်သွား၍ ( အလိုလေး မှားပြန်ပြီ .. သွေ့ ပုချီ ) .. ရည်းစား နှင့် ခေတ္တခဏ ခွဲခွာ နေရပါသဖြင့် မစားနိုင် မအိပ်နိုင် လွမ်းနာ ကျကာ ၂ ပေါင်သာ ကျန်တော့သော နာမည်ကြီး ထမင်းငတ် ...အဲ့ .. နာမည်ကြီး ဘလောဂါ ( လူကတော့ ခပ်ငယ်ငယ်ပါ .. စားကောင်းအောင် မြှောက် ပြောရသေးသည် ) “ကို မျှစ်ချိုးဟင်း” (မြစ်ကျိုးအင်း) ပင် ဖြစ်ပါသည် ။ သူ နဲ့ အလ္လာပ သလ္လာပ စကားအနည်းငယ် ပြော နေခိုက်မှာ ရေနံတွင်း အလုပ်သမားကြီး“ အဖြူလေး” ဆိုသူ ပုဂ္ဂိုလ်တပါး အလုပ်ဆင်းပြီး ညောင်းညာစွာဖြင့် ပြန်ရောက်လာသည် ။ ပညက်သွားရာ ဓါတ်သက် မပါသူပေမို့ အနှီ အဖြူလေး ဆိုသူ မှာ ဂွမ်းပုံကဲ့သို့ဖြူ ဆွတ်ဆွတ်လေးတော့ မဟုတ်ရှာပါ ၊၊ ကုလားမင်းသား “ အမိတဗဂျမ်း” ကဲ့သို့သော ရုပ်ရည်လေး သနားကမားတော့ ရှိရှာပါသည် ။ တခုခု ဆို အမိ ကို တတတ်သော ကိုဗဂျမ်း တဖြစ်လဲ ထို သူက အကျွန်ုပ် အား ၊ မခို့ တရို့ ဖြင့် နှုတ်ဆက်စကားဆိုပြီးသကာလ ရေနံ တွေ ပေပွနေသောကိုယ်ခန္ဒာ ကြီးအား ဆေးကြော သုတ်သင်ရန် အလို့ငှာ ၊ ရေတွင်းလေး ဆီသို့ အပြေးကလေး သွားပြန်လေသည် ။
အကျွန်ုပ် မှာတော့ ဗိုက်ထဲမှ ပိုးပေါင်း တသိန်းက ဒို့ အရေး အော်နေကြပြီ ဖြစ်သဖြင့် ၊ဂနာ မငြိမ် ဖြစ်နေရှာရသည် ။ ကိုညောင်ရမ်းကြီး လက်စွမ်းပြနေသဖြင့် ထွက်လာကြသော စားသောက်ဖွယ်ရာများ၏ မွှေးကြိုင်သင်းပျံ့ လှသော ရနံ့ များက ကျွန်ပ်၏ နှာဖျားဝ မှာ ကလူ၏သို့မြှူ၏သို့ဆိုသလို ဆွဲဆောင် ဖြားယောင်းနေကြရာဝယ် ..ဆာလောင်မွတ်သိပ်ပြီး သွေးအချိုဓါတ်များ နဲပါးနေသော အကျွန်ုပ် မှာ ရင် တဒိန်ဒိန်း ခုန်၍ အာခေါင်တွေ ခြောက်လာရပြီ ဖြစ်သည်။ သို့ ပေမဲ့လည်း ထမင်းဝိုင်းစရန်၊ လူမစုံသေး၍ စောင့်ရပေအုံး တော့မည် ။ ထို အချိန်ဝယ် ဖုံးသံ ကြားရသည် ။ ကျွဲမြီး အနည်းငယ် တိုချင်စရာ အကြောင်း ကို ဖုံးဆက် ပြောခြင်းပါပေ ။ ဘလော့တကာလည် ၊ဆရာကြီး ဦးသုနြေ္ဒ ဆီမှ အချိန်အနည်းငယ် လင့်မည့် အကြောင်း မက်ဆေ့ဖြစ်ပြီး အရင်စားနှင့်ကြဖို့ ပြောပေမဲ့ သူ့ ကို ကြောက်ကြသော တပည့် ကျော်ကြီးများမှ တုပ်တုပ်မလှုပ် ၊ ဆရာလာမှ ဝိုင်းစ ပါမည့်အကြောင်း ကြောင့် အကျွန်ုပ်မှာ အဆာရုပ်ကို ဟန်လုပ်ကာ မချိသွားဖြဲလေးနှင့် စောင့်နေရပေတော့သည် ။ စိတ်ထဲ မတော့ အနှီ လူသားများ အား.. !@#w$%^&*()_+ စသဖြင့် မေတ္တာ ပို့လျှက်ရှိပါသည် ။
လာပါပြီ၊ လာပါပြီ၊ လေဘာတီ မမြရင်တော့ မဟုတ် ၊“ လေပါတီ ဦးသုနြေ္ဒ ” တယောက် ၆ လဗိုက်ကြီး ပွေ့ ပိုက်၍ ၅ ထပ်ပေါ်သို့ မောပန်းစွာတလှိမ့်လှိ်မ့် တက်လာတော့သည် ။ မျက်နှာကလည်း ပြုံးဖြီးဖြီး နဲ့ ၊ အပြစ်ရှိသူ ဆိုပေမဲ့ သူ့ မဟုတ်တဲ့ အတိုင်း“ ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ ဆာရင် စားထားဖို့ပြောသား နဲ့” ဘာညာ သာရကာ သူ့ အပြစ် ကို သူများအပြစ် ဖြစ်အောင် ပြောလိုက်သေးသည်။
ဗိုက်ထဲမှာ တရုပ်မသာဗုံတီးသလို တဂွီဂွီ တဂွမ်ဂွမ် မြည်နေကြသော အကျွန်ုပ် တို့တသိုက်လည်း သူ ပြောတာ ဂရုမစိုက်အား၊ နောက်ကျရခြင်း အကြောင်းရင်းကိုလည်း မမေးအား တော့ပဲ ၊ တက်ညီ လက်ညီ နဲ့ ထမင်းပွဲ ပြင်ဆင် ပြီး ခေါင်းမဖေါ်တမ်း စားဖြစ်ကြသည် ။ ( ဤ နေရာတွင် အစက ကိုညောင်ရမ်း၏ လက်ရာ စားချင်ဖွယ်ရာ များကို ဘလောဂါတို့ ထုံးစံ အတိုင်း ဓါတ်ပုံ ဝေဝေ ဆာဆာဖြင့် ဖေါ်ပြပေးရန် ရည်ရွယ် ပါသော်လည်း ဆာလောင်မွတ်သိပ် နေသူတို့ ၏ ထုံးစံ အတိုင်း ကြိုက်မရှက် ငတ် မရှက်ဆို တော့ လက်သွက် ခြေသွက်ဖြင့် အစွမ်းကုန် ဝိုင်း တွယ် လိုက်ကြပါသဖြင့် ဓါတ်ပုံ တပုံမျှ မရိုက်ယူလိုက်ရပါကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ အစီရင် ခံအပ်ပါသည် ။ ဒီတော့ စာသားဖြင့်သာ မျက်စိ အညောင်းခံ ဖတ်၍ အာရုံ ယူကြပါရန် တောင်းပန် အပ်ပါသည်) ။
“ ကိုညောင်ရမ်း၏ လက်ရာများ ”
-ဝက်သားဆီပြန်ဟင်း ။ငြုတ်ရောင် နီရဲရဲ ၊ အဆီအနှစ် ခပ်ပျစ်ပျစ်၊ ဝက်သားတုံးလက်တသစ် တုံးများကို ဗမာဆန်ဆန် နူးအိ နေအောင် ချက်ထားသည် ။
-ပဲကြီး နှင့် ဆူးပုတ်ရွက် ဟင်းရည် ၊ အနေတော် နူးပြီး သောက်၍ ကောင်းသည်။
-ငပိရေ နှင် တို့စရာများ ( သခွားသီး ၊ ရုံပတီသီးအတောင့်သေးသေးးပြုတ် ။ ဆူးပုတ်ရွက် ။ စသဖြင့်) .. ငပိရည် ပန်ထွေ ဖျော်မှာ - ဟင်းရည်သောက် ပန်းကန်လုံးကြီး တလုံးစာ အပြည့် ။ အစွမ်းကုန်အားပေးလိုက်ကြသဖြင့် ခဏတာ အတွင်း ခါလီ ပြသွားရှာ၏ ။
- ဗာလချောင်ကြော် ။ မစပ် တစပ်လေး။
- ဂေါ်ဖီရွက်ကြော် ပူပူလေး ၊ ( ဆရာကြီး အိမ်ထဲ ဝင်လာမှ ကမန်းကတန်း ကြော် ခြင်းဖြစ်သည် ။ ရှူးရှဲ ကြော်ပြီးချက်ခြင်းစားမှ အရသာ ရှိသည် ဆိုပြီး အိုးသူကြီးက စေတနာဖြင့် နောက်ဆုံးမှ ကြော်ပေးခြင်း ဖြစ်သည် ၊)
တကဲ့ ဟင်းက အခုမှ လာချသည် .... “ပုစွန်ပေါင်းထုတ် ” တဲ့ ၊ တသက် နဲ့ တကိုယ် ခုမှ စားဖူးခြင်းဖြစ်သည် ။ ပုစွန်၊ မျှစ်သေးသေး အချောင်းများ ၊ကြက်သွန် နီ ကြီးကြီး ခပ်ထူထူ လှီး၊ စပါးလင် ထောင်းပြီး အရည် ညှစ် ၊ဆန်မှုန့် တို့ တွင် ဆား၊ ကြာညို့ ၊ဆနွင်းမှုန့် အနည်းငယ် ထဲ့ ရောသမမွှေပြီး ငှက်ပျောရွက် ဖက်ဖြင့် ထုတ်ကာ ပြန်ပေါင်းထားခြင်းဖြစ်သည် ။ စားလို့ အလွန် ကောင်းပါသဖြင့် အိုးကြီး တအိုး အပြည့်လည်း ခဏ အတွင်း ကိစ္စချော သွားရှာ သည် ။ မျှစ်ပါသဖြင့် မျှစ်ချိုးဟင်း ဆိုသူ က အများဆုံးစားခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်တကြိမ် ထပ်လုပ်ကျွေးရန် အားလုံးက တညီ တညွတ် ထဲ တောင်းဆို လိုက်ကြသည် ။
ထမင်းဝိ်ုင်းအပြီး ၊ ဗမာ ပီပီ ရေနွေးကြမ်းသောက်ကြရင်းမြေပဲဆံလေးဝါးရင်းဖြင့် အလ္လာပ သလ္လာပ စကားများပြောဖြစ်ကြသည် ။ ဆရာ သုန် တယောက် သူ ၏ ရေနွေးကြမ်း ဋီကာ ချဲ့ပြန်သည် ။ ဟွေ ကမ်း တဲ့ .. ဟွေ ( 回 ) = ပြန်လည်လှည့်ပတ်လာသည် ။ ကမ်း (甜) = အချိုဓါတ်။
အဲ့ဒီလဖက်ခြောက်က အချို့သော လဖက်ခြောက်များလို့ သောက်ပြီး တာနှင့် ခံတွင်းထဲမှာ ခါးသက်သက် အရသာ မကျန်စေခဲ့ကြောင်း၊စစခြင်းသောက် လိုက်ချိန်မှာ အနည်းငယ် ခါးသက် သယောင်ရှိပေမဲ့ သင်းပျံ့ သော လဖက်၏ သဘာဝ ပင်ကိုယ် အမွှေးရနံ့နဲ့ အချိုဓါတ်ကလေးက ရေနွေးကြမ်းကို မြိုချ ပြီးချိန် မှ သာ ပြန်ပေါ် လာတတ်ကြောင်း .. မြွက်ကြားပြန်သည်။ ဪ.. ဆ ..ဆရာကြီးဆိုတဲ့ အတိုင်း သိတာတွေရော မသိတာတွေ ရော .. ရော ရော ချတတ်သူ ဖြစ်သည် ။
ဒီလို နဲ့ ရောက်ရာပေါက်ရာ ထွေရာ လေးပါး ရှစ်ပါးမက ပြောလိုက်ကြ ၊ တဟားဟား ရယ်လိုက်ကြ နှင့် ရှိနေချိန်မှာ မျှစ်ချိုးဟင်းက ငါးမုတ်ကြော် တပန်းကန်ကြီးကြော် လာပြီး ဧည့်ဝတ် ပြု ပြန်သည် ။ ဤတွင် စပ်စပ်စုစု ရှိပြီး မျက်စေ့လျှင်သော ကျွန်ုပ် မှာ အနှီသကောင့်သား ၅ ယောက်၏ ပြုံးဖြီးဖြီး မျက်နှာပေးများကို သတိပြုမိလိုက်လေသည် ။ ၅ယောက်ဟုဆို၍ မျက်စိ မလည်စေချင်ပါ ။ ဆရာသုန် ၊ ကိုညောင်ရမ်း၊ မျှစ်ချိုးဟင်း၊ အဖြူလေး တို့ အပြင်“ တရုပ်ကက်ဆက်” ဆိုသူ တဦးရှိသေးသည် ။တချက် တချက်မှ ထ၊ ထ ပြီး အသံထွက်တတ်သဖြင့် ဤ အမည် တွင်ရခြင်း ဖြစ်ပေမည် ။ ပြုံးဖြီးဖြီး မျက်နှာပေးအကြောင်းပြန်စပါမည် ။သူတို့၅ ဦးသား မရိုးမရွ မျက်နှာပေးများ ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကို စပ်စုလို ( ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သိလို စိတ် ဟု အဓိပ္ပါယ် ကောက်ယူ ကြစေလိုပါသည်) ဖြင့် အကျွန်ုပ် မေးမြန်းလိုက်သည့် အခါတွင် မတော့၊ ပြောလည်း ပြောချင် ၊ ဘယ်က စ၍ ဘယ်လို ပြောရမှန်း မသိ ဖြင့် တယောက် ကိုတယောက် လက်ညှိုးထိုး လွှဲချ တတ်သော လူ့ သဘော ကို ဤ နေရာတွင် မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ ရှိ လိုက်ရပေတော့သည် ။ ထိုအချိန်တွင် ဖိုးဆိုချင် ဖြစ်သူ မျှစ်ချိုးဟင်းမှ စတင်၍ သူတို့လူပြိုကြီး၊ လူပြိုလေး ၄ယောက်၏ အပေါ်ထပ်နှင့်အောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းကို ဤသို့ စတင် အစီရင် ခံပါတော့ လေတော့ သတည်း ။ . . .
( ဆက်ရေးရန် ကြံရွယ် ပေ မဲ့ အလကားရ၍ မတရား တနင့် တပိုး စားလာသော စေတနာ ဗလပွ ဟင်းများကြောင့် အကျွန်ုပ်မှာ လေပွ ပြီး မရှူ နိုင် မကယ် နိုင် ဖြစ် လာ ပါသဖြင့်ဆက်လက်ရေးသားရန် ငြိမ်သက် နိုင်စွမ်း မရှိတော့ပါသဖြင့် ဤ နေရာတွင် တထောက် နားပါမည် ။ ထွေလာကားလေးများကြည့် အပြီး တကဲ့ ဇာတ်လမ်း ကြီးကို ပြသခါနီး မှာ မီးပျက်သွားရ သလိုမျိုး ဆန့် တငင်ငင်ဖြစ်ရသည်ဆိုလျှင် တောင်းပန်အပ်ပါသည် ၊ ဒါမှမဟုတ် ပြီးပါပြီ ဟု ဤနေရာတွင် စာတမ်းထိုး ထားလိုက်ပါမည် ။)
ဤ စာ ကို ဖတ် နေစဉ် အတွင်း အနီရောင်စာသား ထူထူ များဖြင့် ဖေါ်ပြထားသော ဗလပ် ဗလပ် ဗလပ် ၊ ဂေါ်ဖီရွက်ကြော် နှင့် ငါးမုတ်ကြော် များ ကို သတိပြုစေ လိုပါသည် ။ ဆားပုလင်း နှင်းမောင် မဟုတ်ပေမဲ့ အိုင်ဆေး ကိုသိန်းမောင် ကဲ့သို့နမိတ်ပြ စကားလုံးလေးများ မှာ ဆက်လက်ရေးသားမည့် အပေါ်ထပ်နှင့် အောက်ထပ်ဇာတ်လမ်း အတွက် အကျုံးဝင်စေမှာဖြစ်ပါသည် ။
ချမ်းမြေ့ ကြပါစေ ။
:kiki : at 12/13/2009 08:45:00 PM
ခုတလော တွေးစရာတွေ များလို့ဦးနှောက်စားနေတာ ၊ဇကာပေါက်လိုပါပဲ ။ကိုယ့်ဦးနှောက် ကိုယ်ပြန်ဖေါက်ကြည့် မိလိုက်တာကိုး ။တောင်မရောက် မြောက်မရောက် အတွေးတွေ ကို တောင်စဉ်ရေမရပ် ဟိုတွေး ဒီတွေး နဲ့ဘဲဥအစရှာနေ မိတာ က မျိုးဆက်တွေ ၊ တာဝန် ယူတတ်မှု တွေ ၊ဒီဇင်ဘာ အားကစားလ ဘော်လီဘောပွဲ ၊ထုပ်ဆီးတိုးပွဲ အကြောင်းတွေ ။ဘာလို့များ ဂယောက်ဂယက် ဖြစ်နေပါလိမ့် လို့ပြက္ခဒိန် လှမ်းကြည့်မိတော့ မှ “ ဟင် ” .. ဆောင်းတွင်း ရောက်နေပြီကိုး ။ လောကကြီးနဲ့ဘယ်လောက်တောင် အဆက်ပြတ်နေ ပါလိမ့် မလည်း ဆိုတော့ အူကြောင်ကြောင် နိုင်တဲ့ ကိုယ်တယောက် က ခုမှ တရေးနိုး ထကြည့်နေမိတာ Sweet December လို့ပြောတဲ့ အချိန်တောင် လတဝက် ကျိုး တော့ မှာ ပါလား လေ။
တက်ကျမ်းက ဆိုထားတယ် “တာဝန်ယူစိတ်မွေးပါ” တဲ့
ထော်လော်ကန့် လန့်အော်ပီကျယ် ရဲ့ကျကျမ်း က ဆိုပါတယ် ၊ ဒီလိုပါ တဲ့
၁။ ။(တာဝန်ယူစိတ် လား ၊ ဘာလို့ မွေးရမလည်း ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တရားခံ မရှာချင်ပါဘူး လေ ။ ကိုယ်နဲ့ မှ မဆိုင်တာ ၊ ဝေးဝေးသာရှောင် ၊ )
၂။ ။ ပြဿနာ တခုခုဖြစ်လျှင် သူများကို လွှဲချပါ ၊ပါတ်ဝန်းကျင်ကို အပြစ်ဖို့ ပါ ။
( ကိုယ့် E ပုံ ဖြစ်မှန်း သိသာနေရင်လည်း ဗြောင်သာငြင်း ၊ အသံကျယ်တဲ့ သူက နိုင်မှာပါပဲ ။ ဟဲ ဟဲ )
၃။ ။ တာဝန်ယူစိတ် မရှိသော သင့် ဦးနှောက်သည် ဆင်ခြေများစွာကို မှတ်မိနေတတ်သည်။လိုသလို အသုံးချပါလေ ။
(ဆင်ခြေ ဆင်လက် နဲ့ မလောက်သေးရင် ကြက်ခြေထောက်တွေလည်း ရှိသေးတယ် )
၄။ ။ ရှောင်လွှဲ၍ မရပါက တရားခံစာရင်းထဲသို့အခြားသူများကိုပါ ဆွဲထည့်ပါ ။ စကားလုံးကြွယ်ဝ ပါက ကမ္ဘာကြီးကိုပင် ဆွဲထည့်နိုင်သည် ။
(အလကားနေရင်း တရားခံ ရှာနေပြန်ပြီ ။ကမ္ဘာကြီးက သူ့ ဟာသူနေတဲ့ သက်မဲ့အရာဝတ္ထုလေးပါကွယ် )
၅။ ။ ကံသည် ပုံချရန် အလွန် အသုံးဝင်၏ ။
( စိတ်မပျက် နှင့်။ မိမိ တစ်ကိုယ်တည်း အဆင်ပြေရေးကိုသာ လုပ်ဆောင်ပြီး လောက အရေးကိုတော့ ကံကိုသာ တာဝန်လွှဲထားသော အပေါင်းအဖေါ် များစွာ ရှိပါသည် )
အော်ပီကျယ်ရဲ့မှတ်သားဘွယ် အဆိုအမိန့်နှင့် ဆန့် ကျင်ဘက် အတွေးအခေါ် များကို့ပြန်ပြီးဝေမျှ ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဟိုလိုလို ဒီလိုလို အတွေးများကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာပါ ။ဖတ်ပြီး တွေးပြီး ပြုံးနိုင်ကြပါစေ ။
မုဒိတာပွား၍ အကောင်းဖက်မှ ရွေးချယ် တွေးတော တတ်ကြပါစေ ။ မှန်ကန် တိုင်း လည်း မကောင်းပါ ဘူး ။ သူများ အမြင်စောင်းတတ်တယ် ပေါ့ ။
:kiki : at 12/11/2009 10:33:00 PM